Rosia: Veloma mandrakizay ry “khrouchtchevki” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jolay 2008 17:09 GMT
Andro vitsy lasa izay, drugoi, iray amin’ireo mpitoraka blaogy rosiana isan’ny be mpahalala sy malaky misandrahaka indrindra, dia nandefa tamin’ny LiveJournal, izay fampiasany, sary 17 maneho tangoron-trano iray ao Mosko, niorina fony vaninandro Khrouchtchev ( fiantso azy ireny mahazatra ny hoe khrouchtchevki, na pyati etajki, rihana dimy, na koa hoe khrouchtchoby, izay azo adika tsotra hoe trano rsizarizarin’i Khrouchtchev : kilalaon-teny (tsilalaon-teny) ihany izany nalaina avy amin’ny trouchtchoba izay midika hoe trano tsizarizary amin’ny teny rosiana). Hanjavona ity tanana ity ary hisolo toerana azy ny trano fonenana manara-penitra kokoa sy mijoalajoala .
Indreto santionam-panazavana vitsivitsy [amin’ny teny rosiana] mandravaka ny tatitra an-tsariny, izay naharaisana fanamarihana miisa 331:
Ireo Khrouchtchevki tamin’ny fiatombohan’ny taona 1960 ka efa andalam-pandravana any atsimo-andrefan’i Mosko. Ireny tranobe misy rihana dimy ireny, tsy misy balcon, misy lakozia tery kely, [sy kojakojam-pidiovana manana habe toy ny boty kely], rindrina manify ahafahana mandre izay rehetra mitranga ao amin’ny mpifanolo-bodirindrina, dia efa nilaozan’ny zava-misy. Ny tangoron-tranon’i pyati etajki rehetra dia efa nilaozan’ireo nonina tao aminy ary efa miatrika ireo fitaovana matanjaka izay manjera mifandimby ireo tranobe mifanaraka amin’ny drafitra efa voasoritra. Vantany vao mahavita ny asany ireo pelleteuses sy bulldozers, tsy misy miangana intsony afa-tsy tany malalaka midadasika sy foana eo amin’izay nonenan’ireo fianakaviana maro fotoana vitsy talohan’izany. Ireo mpiara-monina amiko ankehitrio dia saiky teraka sy lehibe tamin’ireny pyati etajki ireny, tany no niterahany ny zanany, ary ireny zanany ireny indray avy eo no mbola nanome azy kosa ny zafikeliny. Taranaka nifandimby maro no niaina tamin’ireny khrouchtchoby ireny. Noho ireny toeram-ponenana ireny, mba afaka nandositra ireo efitrano fatoriana tany amin’ny orinasa sy ireny kommounalki sovietika tsy maha-te hijery ireny ny Moskivita [trano fonenana itambaram-be]. Izy ireny no trano fonenana voalohany ho an’ireo vao avy nanorin-tokantrano sy nanome fahatoniana ho an’ireo efa nahazo taona, ary rano mafana ho any an-trano fidiovan’izy ireo tsirairay, na dia kely monja ihany aza. Raha atao bango tokana, misaotra anareo pyati etajki.
Fitadiavana izay hisitrihana, ho an’ireo mponina tamin’ireo pyati etajki, dia sedra iray. Nandritra ireo taona maro niainana teto, nahavita nampivondrona fianakaviana maro (ankohonana) manodidina azy izy ireny, na akaiky na lavidavitra. Nifamatotra amin’ny fomba mampivanaka ny rehetra, ny fianakaviana tsirairay dia manana ny tantarany manokana momba ny fifandraisan’ny samy olona, nefa ny isan’ny trano atolotry ny mpitantana ny tanana mba honenana maimaim-poana dia tsy hoe tsy voafetra akory. Ny vaomiera misahana ny fandinihana ny trangan’ireo “nasitrika” (napetraka) ireo dia mazana no misedra olana : ny sasany tsy tia ny trano vaovao nametrahana azy , ny hafa iondray mikendry ny hahazo efitra lehibe kokoa, na mikasa ny hamela ny zanany, na ny raiamandrenibeny, na ny vadiny teo aloha (na lahy io na vavy), izay niara-nifampizara faritra niainana taminy.
Andreï no farany mponina farany tamin’ny pyati etajka. Efa ho herintaona izao dia mifanolana ara-panjakana amin’ny tompon’andraikitra eo an-toerana izy. Araka ny fanambarany, zavatra mampihomehy sy tsy hay faritana no mahazo azy: nandritry ny dimy taona, nifampizara efitra roa kely tamin’ny vadiny teo aloha izy, ny vady vaovaon-dramatoa io koa sy ny alikan’izy ireo miisa dimy. Mangataka izy ny mba hapetraka amin’ny trano misy efitra roa, farahafaratsiny, amin’ny toeram-ponenana itambarambe, fa misaraka. Ny vaomiera mpikarakara ny fanomezana fonenana kosa anefa dia tsy manolotra afa-tsy efitra roa any amin’ny tranobe vaovao ho an’ireo vady taloha. Namafisin’ny tribonaly ny fanapahan’ny vaomiera. Ny entona fandrehitra (gaz) efa notapahana tamin’ilay tranobe taloha, fa mbola misy kosa ny rano sy ny herinaratra. Tsy hain’ny olona izay hatao amin’izao fotoana.
Andreï dia milaza fa saiky ny olona rehetra ao amin’ny tranobe misy azy dia misedra olana noho ny famindrana toerana avokoa . Andaniny, azo takarina ihany hoe tian’ny olona hivaha indray mandeha ny olana tena mafy mahazo azy, dia ny trano fonenana izany, fa esty ankilany, ny fanjakana dia andalam-panomezana azy ireo maimaimpoana toerana hiainana misanda dolara an’arivony maro, ka raha izany dia tena miady marina ho an’ny ainy.
[sarin-behivavy iray mijoro manoloana ny tranobe iray efa rava amin’ny antsasany, mitafa amim-behivavy iray hafa, mbola monina ihany amin’io tranobe io, eo am-baravarankeliny]
– Sveta, sao mba tsinjonao any ho any ireo kiraro tontako?
Tsy apetraka honina amin’ny faritra lavitra intsony ireo mponina tamin’ny pyati etajki: omena trano fonenana eto izy ireo, miala tokony ho tangoron-trano roa tamin’ny azy fahiny.
[sary farany, tilikambo vao naorina tsy ela loatra]
Ao anatin’ity tranobe ity, efa manomboka ny fiainam-baovaony ireo mponin’ny khrouchtchevki.
Ireto misy fanamarihana nofantenana avy amin’ireo nateraky ny tatitra an-tsarin’i drugoi ; ny sasantsasany dia avy amin’ireo mpitoraka blaogy monina any amin’ireo repoblika sovietika fahiny, Belarosia, Ukraina, Litoania :
Ireo temitra sovietika nolazoin’ny fotoana no sary manetsi-po amin’ireny trano arodana ireny.
Mahatalanjona ny mahita ireo khrouchtchevki ao Minsk [Belarosia] toa manana endrika hafa mihitsy, miaraka amin’ireto balcons, sns… ary tsy misy olona mandrava azy ireo 🙂
Karazana hafa mihitsy ireo. Ao Mosko, misy pyati etajki izay tsy voakasiky ny resaka fandrodanana : raha ny tokony ho izy, vita amin’ny biriky izy ireny ary misy balcons. Ireo amin’ny sary dia natao hampiasaina mandritry ny 40 taona, ary [ny ben’ny tanan’ny Mosko, Youri Loujkov] dia, amin’ny lafiny hafa, eo an-dalam-panatanterahana ny drafitry ny fitondrana sovietika 🙂
Mampalahelo kely ihany na dia izany aza … Izaho koa dia teraka sy lehibe tamin’ny karazandrazana khrouchtchevka. Tranoko io, na dia any Kiev aza no misy ny khrouchtchevka-ko. Ary angamba mbola mba hitoetra ela izany.
Ny sary sasany dia toy ny nalaina tany Tchernobyl… Mahafatifaty !
Angamba hevitra tsara ny mba hitazonana iray amin’ireny tranobe ireny tsy ho simba sy hanaovana azy ho rakitry ny ela momba ny fiainana andavanandro. Mba hahafahana, aoriana any, mahalala ny zava-nisy nanodidina ny tena nandritry ny fahazazana na ireo zavatra nananan-dry nenibe fahiny.
Izaho koa lehibe tany amin’ny khrouchtchevka, ary mbola monina any. Saingy aty Litoania, tsy ravana izy ireny . Ny mifanohitra amin’izany aza fa amboarina sy ampiana rihana fanampiny, mba tsy ho lafo loatra ny fanavaozana. Hijoro isika ry Khrouchtchevki!
Kroasia 28 Marsa 2022
Okraina 06 Marsa 2022
Okraina 02 Marsa 2022